Otu esi echekwa megabytes nke ọnụego gị n'ụzọ dị mfe | Akụkọ akụrụngwa
Ruo n'oge na-adịbeghị anya, ọ dịghị onye lekọtara obere megabytes nke ọnụego anyị nwere, mana ka oge na-aga na ngosipụta nke ngwa ngwa ngwa ngwa ma ọ bụ netwọkụ mmekọrịta, megabytes adịla ezigbo mkpa, ruo n'ókè nke na ọtụtụ ndị ọrụ adịworị were ego ha na-eji akwụ ụgwọ dabere na megabytes ma ọ bụ karịa gigabytes ha na-enye.
Ọ dabara nke ọma enwere nhọrọ ndị ọzọ na-abụghị nke ịhapụ akụ na ọnụego na ọtụtụ megabytes, ọ bụkwa iji mụta nke ọma otu esi echekwa megabytes nke ọnụego gị n'ụzọ dị mfe. N'ọtụtụ oge anyị nwere ọrụ enyere na ekwentị anyị nke na-eri nnukwu megabytes, anyị na-arụ ọrụ ndị na-enweghị isi na n'ozuzu anyị na-etinye megabytes n'ụzọ na-enweghị nleghara anya nke na-enweghị mgbagha na anyị na-echeta njedebe ọ bụla nke ọnwa mgbe megabytes dị ụkọ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchekwa megabytes ma mee ya n'ụzọ dị mfe, nọgidenụ na-agụ n'ihi na ndụmọdụ niile anyị ga-enye gị ga-abụ nnukwu enyemaka.
1 Melite ngwa site na WiFi
1.2 Na iOS
2 Kpachara anya na ntinye faịlụ na-akpaghị aka
3 Gbanwee mmekọrịta nke akaụntụ
4 Kwadebe njem gị tupu ịmalite ha
5 Budata faịlụ naanị jikọọ na netwọk WiFi
6 Jiri egwu playback nke Spotify, Netflix na YouTube
7 Machibido ndabere data ojiji
8 Jiri mkpakọ data sitere na ihe nchọgharị weebụ
9 Jiri nghọta nkịtị
Melite ngwa site na WiFi
Ngwa ndị anyị awụnyere na ama anyị kwesịrị imelite site n'oge ruo n'oge iji rụọ ọrụ zuru oke ma ọ bụ melite njirimara ya. Mgbe ụfọdụ mmelite ndị a na-ewere megabytes buru ibu, yabụ ụzọ dị mma iji ghara ịhapụ ha bụ imelite ngwa site na netwọk WiFi mgbe niile.
N'ebe a, anyị na-egosi gị otu esi agbanwe agbanwe ma gam akporo na iOS.
Iji gbanwee ụzọ iji melite ngwa na ngwaọrụ nwere sistemụ arụmọrụ gam akporo, nweta ụlọ ahịa ngwa ọrụ ma ọ bụ Google Play. Ozugbo ị ruru, gaa Ntọala wee chọọ nhọrọ iji melite na-akpaghị aka, ebe ị ga-elele nhọrọ ahụ "Melite ngwa na akpaghị aka naanị site na Wi-Fi".
On Apple ngwaọrụ ihe iOS sistemụ, ị ga-enweta Ntọala wee iTunes Store na App Store, ebe ị ga-uncheck na "Jiri mobile data" igbe.
Kpachara anya na ntinye faịlụ na-akpaghị aka
Imirikiti ngwa ndị anyị tinyere na igwe mkpanaka anyị na-edepụta n'ime igwe ojii nke ụfọdụ onyonyo ma ọ bụ vidiyo anyị na-eme. Ọ bụrụ na eme nke a na-ejikọghị na netwọk WiFi, ịnwere ike ịnweta data nke onye ọrụ ekwentị mkpanaka anyị na-enye anyị n'otu ntabi anya.
Lelee Google Photos, Dropbox ma ọ bụ Facebook Ebe ọ bụ na enweghị mgbagha, ị nwere ike iri ọtụtụ megabytes ị ga-achọ n'oge ọ bụla.
Gbanwee mmekọrịta nke akaụntụ
Na ngwaọrụ mkpanaka anyị, anyị nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke akaụntụ, email, ngwa izi ozi ngwa ngwa ma ọ bụ netwọkụ mmekọrịta mmekọrịta. Ma gam akporo ma iOS mekọrịta ihe ndekọ ndị a niile na-akpaghị aka na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'ihu, iji gwa anyị site na ọkwa nke ihe ọ bụla na-eme. Nke a na-ekwughi na ọ na-eri nnukwu megabytes nke ọnụego anyị.
Usefulzọ bara uru iji chekwaa megabytes bụ iwepu mmekọrịta nke ụfọdụ akaụntụ ndị ahụ nke ị na-ejighi oke ma ọ bụ belata oge mmekọrịta.. Dịka ọmụmaatụ, ihe bara uru bụ imebi mmekọrịta nke netwọkụ mmekọrịta, nke anyị na-enyocha ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ obere oge ọ bụla, ma ọ bụrụ na emeghị ka anyị mata ozi ahụ, anyị agaghị emetụta anyị n'ihi na anyị ga-achọpụta ya n'onwe anyị.
Ihichapụ ma ọ bụ mezie mmekọrịta nke ụfọdụ akaụntụ, naanị ị ga-enweta ntọala izugbe nke ọnụma wee nweta ntọala mmekọrịta.
Kwadebe njem gị tupu ịmalite ha
Otu n’ime ngwa ndị kacha eri megas bụ ihe nchọgharị dịka Google Maps, yabụ ọ dị ezigbo mkpa ịhazi njem tupu ịmalite ha, wee budata eserese niile na data anyị ga-achọ maka njem anyị tupu ịmalite ya.
Ruo oge ụfọdụ lImirikiti ngwa ndị a na-enye gị ohere ibudata ụfọdụ map, wee jiri ha na-anọghị n'ịntanetị. Nbudata nke eserese jikọrọ na netwọk WiFi ga-abụ ihe na-atọ ụtọ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịchekwa megabytes.
N'ụzọ dị mwute, n'ọtụtụ oge anyị na-akwa ụta na anyị erichapụla data anyị niile mgbe njem ahụ gachara nke anyị ji ezigbo megabytes na gigabytes mee njem ahụ dị ogologo. Echefula, ngwa nke na-erepịa ọtụtụ megabytes nke ekwentị gị bụ doro anya Google Maps, Maapụ ma ọ bụ ihe nchọgharị ọ bụla ọzọ.
Budata faịlụ naanị jikọọ na netwọk WiFi
Ọ bụ otu n'ime ndụmọdụ kachasị eji eme ihe gburugburu ụwa, mana nke dị mwute na ọtụtụ n'ime anyị na-anọgide na-eleghara anya. Ma nke ahụ bụ ibudata faịlụ na-ejikọtaghị na netwọk WiFi bụ mmefu nke megabytes nke ọnụego anyị nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla enweghị ike imeli.
Ọ gwụla ma ọ dị mkpa ibudata faịlụ ahụ, mee ya mgbe ọ bụla ejikọrọ gị na netwọk WiFi wee si otú a zere mmefu na-enweghị isi nke megabytes ole na ole.
Jiri egwu playback nke Spotify, Netflix na YouTube
Anyị na-ejiwanye ụfọdụ ọrụ ntanetị dị ka Spotify, Netflix o YouTube, nke na-eri nnukwu megabytes nke ole anyị nwere na ọnụego anyị. Ọ dabara nke ọma, ngwa ndị a na-enye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnọdụ niile na-anọghị n'ịntanetị na anyị kwesịrị ịme ọtụtụ.
Dịka ọmụmaatụ Spotify na-enye anyị ohere, ọ bụrụhaala na anyị debanyere aha na akaụntụ adịchaghị, iji budata egwu kachasị amasị anyị mgbe ejikọtara anyị na netwọki WiFi, si otú a na-ezere imebi megabytes nke ọnụego anyị. N'ihe banyere Netflix, YouTube na ọtụtụ ngwa ndị ọzọ nke ụdị a, kpọmkwem otu ihe na-eme, ya mere, leruo ha anya ma budata ọdịnaya ịchọrọ ịnụ ụtọ ma emechaa ma ọ bụ nke ị na-enwe mgbe niile.
Machibido ndabere data ojiji
N'agbanyeghị ihe anyị niile kwenyere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ngwa anyị arụnyere na ngwaọrụ mkpanaka anyị ka jikọọ na netwọk nke netwọkụ iji zipu ma nata data n’amaghị ama banyere ya ọtụtụ oge. Ọ dabara nke ọma, na gam akporo na iOS ọ ga-ekwe omume ijide njikọ ndị a ma gbochie ha iri megabytes ole na ole, n'agbanyeghị ole ole.
Ọ bụrụ na ị gaa na ntọala nke ngwaọrụ mkpanaka gị ma nweta menu ngwa, ị nwere ike ịlele megabytes nke ngwa ọ bụla na-ere. N'ime nke ọ bụla n'ime ha, ị ga-enwe ike ịhụ ole megabytes ha na-eri n'azụ wee kwụsị ya n'ụzọ dị mfe.
Tupu ịta ụta maka ihe ma ọ bụ onye, ​​chọpụta ngwa nke na-arụ ọrụ na ndabere ma belata oke ha iji zere ihe ijuanya na-adịghị mma.
Jiri mkpakọ data sitere na ihe nchọgharị weebụ
Ọ bụrụ n ’ịlele data data nke ngwa ngwa mkpanaka gị, ị ga - enwe ike ịchọta ihe nchọgharị weebụ gị na ọnọdụ mbụ. Nke a bụ n'ihi na anyị na-eme ọtụtụ ọnụọgụ ajụjụ kwa ụbọchị na-eji Google Chrome, Microsoft Edge o safari. O doro anya na akụkụ dị mma bụ na anyị nwere ike belata oriri nke ihe nchọgharị ndị a, na usoro nke megabytes, n'ụzọ dị mfe.
Ruo oge ụfọdụ ugbu a ọnụ ọgụgụ dị nta nke ihe nchọgharị, ụfọdụ n'ime ndị a kacha mara amara, na-enye nhọrọ ịpịkọta data ahụ. Nke a bụ na ihe nchọgharị ahụ n'onwe ya na-ejikọ data niile ọ ga-egosi na njedebe gị, na igwe ojii, wee ziga ya na-agwakọrịrị ya na ihe ọ na-erepịa megabytes iji budata ibe weebụ ka mma.
Dịka ọmụmaatụ, na Google Chrome, otu n'ime ihe nchọgharị weebụ kachasị eji eme ihe, naanị gaa Ntọala ma mee ka mkpakọ rụọ ọrụ na Njikwa Bandwidth. Ọ bụrụ n ’inyocha ihe oriri nke ngwa a na ụbọchị ole na ole, ị ga - achọpụta na ọ gafere site n’inwe ike kachasị elu nke ngwaọrụ gị, ịbụ otu n’ime obere iwere. Dabere na ụfọdụ akụkọ sitere na Google, mkpakọ data na Chrome nwere ike ịchekwa anyị ihe ruru 40% nke megabytes anyị jiri na mbụ.
Jiri nghọta nkịtị
Ikekwe anyị nwere ike inye gị ọtụtụ ntuziaka iji chekwaa megabytes, mana nke kachasị mfe bụ iji ọgụgụ isi eme ihe kwa ụbọchị. Ma ọ bụ na ọtụtụ n'ime ihe ndị anyị gwara gị n'isiokwu a ị maraworị, mana ọ na-adịkarị ngwa ahụ.
Ọ bụrụ na ọnụọgụ data nke ụlọ ọrụ mkpanaka gị na-enye gị anaghị enye gị ọtụtụ megabytes ma ọ bụ GB, jiri ha jiri ezi uche wee nwee ike ịgbatị ya n'oge ịgba ụgwọ gị.
You nweta nweta ego n'ihe metụtara megabytes site na ụfọdụ ndụmọdụ anyị nyere n'isiokwu a?. Gwa anyi na ohere edebere maka ikwu okwu na post a ma obu site na netwọdu ndi anyi no. Ọzọkwa ọ bụrụ na ị mara ndụmọdụ ndị ọzọ iji chekwaa megabytes, mee ka anyị mara na anyị ga-agbakwunye ya na ndepụta a ka mmadụ niile nwee ike iji ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Otu esi echekwa megabytes nke ọnụego gị n'ụzọ dị mfe